कोरोनाको खोप लगाउँन चाहनुहुन्छ? अनलाईन फाराम भर्नुहोस्, यस्तो छ तरिका – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : काठमाडौं : सरकारले कोरोनाको खोप लगाउन चाहनेका लागि अनलाइन फाराम भर्न अनुरोध गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोप लगाउन चाहने नागरिकलाई स्वैच्छिक फारम भर्न आग्रह गरेको हो। स्वैच्छिक व्यक्तिगत दर्ता फारम भएको भन्दै मन्त्रालयले यो दर्ता फारम हालसम्म खोप नलगाएका १८ वर्ष र सो माथिका व्यक्तिहरूले भर्न सक्ने जनाएको छ।
यो दर्ता फारमबाट प्राप्त विवरणले पालिका स्तरमा खोपसँग सम्बन्धित योजना तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि सहज हुने मन्त्रालयले सूचनामार्फत जनाकारी दिएको छ।
जेठ २ बाट ९ दिनसम्म चल्ने खोप अभियानमा एक लाख ५९ हजार ४ सय ९९ जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेको जनाइएको छ। फाराम भर्ने बित्तिकै खोप लगाउने सुनिश्चितता भने नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। फाराम भर्न यहाँ थिच्‍नुहोस्
Prevआमाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएपछि छोराले पनि भिरबाट हाम फालेर प्राण त्यागे !
Nextआजपनि नेपालमा हजारौं संक्रमित थपिए, सयौं को मृत्यु